महान खेलाडी पेलेका जीवनोपयोगी भनाइहरु - Safal Stories
Home Safal's Columns Quotations महान खेलाडी पेलेका जीवनोपयोगी भनाइहरु
महान खेलाडी पेलेका जीवनोपयोगी भनाइहरु
रान्तेस दो नासिमेन्तो ब्राजिलका पूर्व फुटबल खेलाडी हुन्। उनलाई संसारभरिका मानिसहरू पेले उपनामले चिन्दछन्। साथीहरुले उनलाई उक्त नाम दिएका थिए । उनको जन्म ब्राजिलको त्रेश कोरसोंइसमा अक्टुबर २३, १९४०मा भएको थियो। पेलेलाई आफ्नो खेल जीवनमा ‘फुटबलको राजा’ भनेर पनि चिनिन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलिम्पिक समितिले उनलाई शताब्दि-खेलाडी उपाधि दिएको छ।
सफलता कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो त लगातारको सिकाइ, प्रयास, मेहनत, आत्मविश्वास, दृढता र कामप्रतिको मायाको नतिजा हो ।
कोही पनि जन्मजात केही बन्नको लागि जन्मिएको हुंदैन । व्यक्तिले आफूभित्रको क्षमतालाई चिनेर त्यसलाई आफ्नो वातावरणमा कसरि प्रयोग गर्छ, त्यही अनुसार उसले आफ्नो परिचय बनाउँछ ।
उत्साह नै सबैथोक हो । यो गितारको स्ट्रिंग जस्तै झंकृत भैराख्नुपर्छ ।
यो संसारमा सबै कुरा खेल हो । हामी सबै एउटा समयबाट अर्को समयमा पास हुँदै मर्छौं ।
यदि तिमी राम्रो खेलाडी बन्न चाहन्छौ भने, खुट्टा र दिमाग दुवैलाई संगै चलाइरहनुपर्छ ।
ख्याल राख, त्यहाँ सधै एउटा व्यक्ति हुन्छ, जसले तिमीले भन्दा बढी तथा कठीन अभ्यास गरिरहेको छ र तिमीभन्दा राम्रो बनिरहेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, असल व्यक्ति बन्नु हो ।
सफलता जति कठीन हुन्छ, जित्नुको मज्जा त्यति नै धेरै आउँछ ।
कहिल्यै पनि कुनै एकजनाले मात्र खेल जित्न सक्दैन ।
तिमीले कतिपटक खेल जित्यौ, त्यसले सफल मानिदैन । तिमीले हारेर पनि विश्वासका साथ फेरी खेलेर जित्यौ भने सफल बन्छौ।
राम्रो टिम राम्रा खेलाडीहरु रोजेर बनाइएको हुंदैन । राम्रो टिममा आ-आफ्नो छुट्टाछुट्टै विशेषता भएका खेलाडीहरु हुन्छन् ।
मृत्युको दिन आउँदा पनि म खुशी हुनेछु । किनकी मैले मेरो जीवनमा आफूले सक्दो प्रयास गरेको छु ।
हरेक कुरा तिमीले गर्ने अभ्यासमा भर पर्छ ।
Previousविद्यार्थीले आफ्नो ‘रिजल्ट’लाई कसरि लिने ? अभिभावकले कसरि सहयोग गर्ने ?
Nextअसफलताबाट उठेर कसरी अगाडी बढ्न सकिन्छ ? ५ टिप्स